आउदो साउन महिनामा परीक्षा हुने गरि तयारी थालियो ! – yuwa Awaj
आउदो साउन महिनामा परीक्षा हुने गरि तयारी थालियो !
जेठ १२, २०७८ बुधबार 2
को’भिड–१९ का कारण स्थगित गरिएको परीक्षा आउँदो साउनमा लिइने तयारी थालेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको परीक्षाहरु साउन महिनामा लिइने गरी तयारी थालिएको हो ।
परीक्षा फाराम जेठ २० गतेसम्म भराउने तथा छुट भएका विद्यार्थीले अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको परीक्षा नि’यन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिए । केही दिनभित्रै परीक्षाको कार्यतालिका नै प्रकाशन गरिने छ ।
परीक्षा मोडेलको निर्णय छिट्टै परीक्षाको मोडेलका बारेमा अर्को सातासम्म विश्वविद्यालयले निर्णय गर्ने भएको छ । वार्षिक परीक्षा प्रणालीका विद्यार्थी भएका कारण अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा लिने कुरा भने सम्भव नहुने परीक्षा निय’न्त्रक जोशीले स्पष्ट गरे ।
Prevथपियो निषेधाज्ञा अवधी ,अब यी क्षेत्रहरु कडाइका साथ बन्द हुने,पूरा पढ्नुहोस
Nextयसपालिको मनसुन जोखिमपूर्ण, बाढी-पहिरोबाट १८ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान
आज कहाँकहाँ हुँदैछ भारी वर्षा ? सतर्क रहन आग्रह
राजीनामा दिए देश डुब्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई गगन थापाको कडा जवाफ…हेर्नुहोस् ।